Ityala lokufa elingalunganga ngoku liFakelwe iNtlekele yoMnyhadala woMculo we-Astroworld
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ityala lokufa elingalunganga ngoku liFakelwe iNtlekele yoMnyhadala woMculo we-Astroworld
Amagqwetha aseTexas uSteve Hastings kunye noHenry Blackmon weHastings Law Firm bafake isimangalo ngoMvulo ngokuchasene nerapper uTravis Scott, uCactus Jack Records, Scoremore, kunye nabaqhubi be-NRG Park ngokunxulumene neentlekele kumnyhadala womculo we-Astroworld oshiye abantu abasibhozo beswelekile kwaye. abanye abaninzi benzakala kakhulu.
Ityala lifakwe egameni likaMaria Pena eHarris County, eTexas. Ukulandela umnyhadala wangoLwesihlanu ebusuku, waphulukana nonyana wakhe oneminyaka engama-23 ubudala, uRudy Pena.
Isimangalo sityhola ukuba kwangethuba ngexesha leekonsathi zekonsathi zophule imiqobo yokungena kwindawo kwaye kamva izihlwele zaleqa iqonga ngelixa uTravis Scott edlala. Ezi zityholo zikwabonisa ukuba ingxinano yabantu ababezimase leyo bashiye bekhefuzela abanye bephulukene neengqondo. Nangona ezi ziganeko zisenzeka kwaye ngelixa izithuthi zikaxakeka zizama ukufikelela kwabo babandezelekileyo, umboniso waqhubeka.
Isimangalo sithi imiba emininzi isixa sokungakhathali kunye nokungakhathali okukhulu kwabaMangalelwa kwaye ifuna ngaphezulu kwe- $ 1,000,000.00 yomonakalo.